Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka i-Linux Mint 16 Petra | Kusuka kuLinux
Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka i-Linux Mint 16 Petra
Njalo lapho zikhona ngaphezulu Los abasebenzisi kwalokhu kusatshalaliswa ubukwazi hlukana de Ubuntu bese uthatha indlela ehluke kancane. Nawu umhlahlandlela wokufaka ngemuva wabasebenzisi oqala nje.
Okunye ukucatshangelwa okufanele kucatshangwe ngaphambi kokuqala umhlahlandlela:
Ngemuva kokucacisa la maphuzu, siyaqhubeka nokuhlunga ezinye zezinto ezingenza impilo ibe lula ngemuva kokufaka inguqulo entsha yeLinux Mint.
2 2. Faka abashayeli abaphethe (ikhadi levidiyo, i-wireless, njll.)
3 3. Faka iphakethe lolimi
4 4. Enza ngendlela oyifisayo ukubukeka
5 5. Faka amafonti okuvimbela
6 6. Faka izinhlelo ezizodlalwa
7 7. Faka ama-plugins alalelwayo nesilinganisi
8 8. Faka iDropbox
9 9. Faka ezinye izinhlelo
10 10. Funda imibhalo esemthethweni
11 Hlola uhlelo lwethu olusha
2. Faka abashayeli abaphethe (ikhadi levidiyo, i-wireless, njll.)
Kokuncamelayo Kwemenyu> Amashayeli angeziwe singabuyekeza futhi sishintshe (uma sifisa) umshayeli ophathelene nekhadi lemidwebo noma enye idivayisi edala izinkinga.
3. Faka iphakethe lolimi
4. Enza ngendlela oyifisayo ukubukeka
Kunezindlela eziningi zokwenza, futhi zonke zikhululekile! Ku- http://gnome-look.org/ sine-database enkulu yamaphephadonga, izingqikithi, amathuluzi nezinye izinto ezizosisiza ukuthi "sibuke" ideskithophu yethu. Singasebenzisa futhi amathuluzi amathathu awaziwayo:
1. I-Docky, ibha yesinqamuleli nezinhlelo zokusebenza zedeskithophu yethu. Iwebhusayithi esemthethweni: http://wiki.go-docky.com/index.php?title=Welcome_to_the_Docky_wiki. Ukufaka: esigungwini sibhala: sudo apt-get ukufaka docky
2. I-AWN, enye ibha yokuzulazula, cishe esincintisana nayo ukuze imiswe esikhumulweni semikhumbi! Iwebhusayithi esemthethweni: https://launchpad.net/awn Ukufaka: kusuka kumphathi wohlelo.
3. Conky, uhlelo lokuqapha olubonisa imininingwane kuzinto ezahlukahlukene, njenge-RAM, ukusetshenziswa kwe-CPU, isikhathi sohlelo, njll. Inzuzo enkulu ukuthi kukhona "izikhumba" eziningi zalolu hlelo lokusebenza. Iwebhusayithi esemthethweni: http://conky.sourceforge.net/ Ukufakwa: sudo apt-get install conky
5. Faka amafonti okuvimbela
6. Faka izinhlelo ezizodlalwa
Ngaphezu komtapo wolwazi omkhulu wemidlalo onawo amakhosombe, sinakho futhi http://www.playdeb.net/welcome/, elinye ikhasi eligxile ekuqoqeni imidlalo yezinhlelo ze-Linux kumaphakheji we-.deb. Uma futhi sifuna ukujabulela imidlalo yethu yeWindows, hhayi ukuphelelwa yithemba, ngoba sinezinye izindlela:
3. Lutris (http://lutris.net/) ipulatifomu yokudlala eyenzelwe i-GNU / Linux, insiza enhle yize isezigabeni zokuthuthuka.
4. Winetricks (http://wiki.winehq.org/winetricks) isebenza njengombhalo osiza ukulanda imitapo yolwazi edingekayo ukuqhuba imidlalo ye-Linux, efana ne-.NET Frameworks, DirectX, njll.
Kuzo zonke lezi zinhlelo, singathintana namakhasi abo asemthethweni, kungaba kwimenenja Yezinhlelo zeLinux Mint noma esigungwini. Ngokufanayo, sincoma ikakhulukazi ukufunda lokhu umfundisi omncane okuchaza ukuthi ungayifaka kanjani futhi uyilungiselele kanjani ngayinye yazo.
7. Faka ama-plugins alalelwayo nesilinganisi
8. Faka iDropbox
Ngeminyaka "yefu", mhlawumbe une-akhawunti ngeDropbox noma Ubuntu One. Ngenye indlela, ungafaka iDropbox usebenzisa umyalo olandelayo: sudo apt-get ukufaka ibhokisi lokudonsa.
9. Faka ezinye izinhlelo
1. Ku Umphathi wohlelo, esifaka kuMenyu> Ukuphatha, sinenani elikhulu kakhulu lezinhlelo zanoma yimuphi umsebenzi owenzeka kithina. Imenenja ihlelwe ngezigaba, okwenza kube lula ukusesha esikufunayo. Lapho uhlelo esiludingayo selutholakele, kumane nje kuyindaba yokucindezela inkinobho yokufaka bese uthayipha iphasiwedi ye-Administrator; Singakwazi nokwenza umugqa wokufaka ozokwenziwa umphathi ofanayo ngokulandelana.
2. Nge Umphathi wephakheji uma sazi kahle ukuthi yimaphi amaphakheji esifuna ukuwafaka. Akunconyelwe ukufaka izinhlelo kusuka ekuqaleni uma singazi wonke amaphakheji esizowadinga.
3. Ngokusebenzisa a Isikhumulo (Imenyu> Izesekeli) nokuthayipha imvamisa igama elithi sudo apt-get ukufaka + igama lohlelo. Kwesinye isikhathi kuzofanele ukuthi ngaphambili sengeze indawo yokugcina ngemiyalo Sudo apt-get ppa: + igama lokugcina; ukucinga uhlelo nge-console singathayipha usesho olufanele.
5. Kusuka ku ikhasi lephrojekthi elisemthethweni uma unezinye izinyathelo zokufaka.
IComix: umfundi wamahlaya
10. Funda imibhalo esemthethweni
Ngamafuphi, phumula futhi ujabulele izinzuzo zesoftware yamahhala. Funda ngasikhathi sinye ukuthi kunjani ukungabi nawo amagciwane, izikrini eziluhlaza okwesibhakabhaka, nemikhawulo yazo zonke izinhlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka i-Linux Mint 16 Petra
Sawubona. Usho ukuthini uma uthi "izinhlelo eziningi namaphakeji ahambelana kakhulu phakathi kwakho kokubili ukusabalalisa"? Ukuthi akukhona konke ukusatshalaliswa okuhambisana nawo wonke amaphakheji we-GNU / Linux? Ngibuza lokhu ngoba ngicabanga ukuthi lesi sitatimende singadida abasebenzisi be-novice.
Akunandaba nalokho, ngicabanga ukuthi lo mbhalo muhle kakhulu kulabo abangena ezweni leMint.
Ngicabanga ukuthi kusho ukuthi, yize iMint isuselwe ku-Ubuntu futhi isebenzisa izinqolobane zayo eziningi zesoftware, kungahle kube khona iphakheji efakwe ngokuzenzakalela ku-Ubuntu hhayi kwi-Mint futhi lokho kungukuncika kwephakeji esifuna ukulifaka. . Uyazi, ukuncika kuyehla.
Noma kunjalo akukho okungenakuxazululwa futhi kuma-software amaningi ngeke kube nankinga.
Siyakuhalalisela kokuthunyelwe! Ilusizo kakhulu futhi, yize iMint ngombono wami ilungiselelwe kangcono kune-Ubuntu, akukaze kube buhlungu ukwazi lolo lwazi!
Kunjalo bakithi. UTesla ushaye ukhiye. 🙂
Okuthunyelwe okuhle, kepha iyiphi imvelo yedeskithophu ongayincoma kule nguqulo ye-linux mint?
ICinnamon uma une-GPU enhle ne-MATE ecaleni elihlukile.
Ukuvuselelwa kwenziwa kahle kakhulu kusuka kumphathi (isithonjana sehawu), ngoba iMint ukuze kugcinwe ukuzinza kohlelo kufaka phakathi izibuyekezo futhi kukuvumela ukuthi ufake ezingeni le-3 ngokuzenzakalela. Uma uvuselela nge-console, amanye amafayela wohlelo lokhiye angaguqulwa.
Kuyathakazelisa ... bengingenalo lolo lwazi! 🙂
Kubukeka sengathi iPetra iphenduka inketho enhle, ngicabanga ukuthi ngizozikhuthaza ukuthi ngiyizame
Yebo, bengingumsebenzisi we-Ubuntu 12.04, futhi ngafaka iMint Petra KDE, ngiyizamile izinsuku ezimbalwa futhi anginqikazi ukufometha i-laptop bese ngishiya iMint kuphela, isebenza kahle, izinze kakhulu futhi ine-interface kukhulu kakhulu.
Ngishintshele kuCinnamon futhi ngiyithande kakhulu ...
okokufundisa okuhle kakhulu kungisize kakhulu
ULuis Marquez kusho
Ukubingelela nokubonga ngomnikelo, ngifuna ukubona ukuthi kusele kangakanani ukuxhaswa kwale nguqulo enhle kakhulu futhi lapho i-lts iphuma, ngingatholaphi imininingwane eminingi ngayo.
Ngiyabonga futhi ngilindele impendulo yakho enomusa.
Phendula uLuis Marquez
I-LM 16 izosekelwa kuze kube nguJulayi 2014.
Ngiluthande kakhulu ulwazi.
Nginenkinga engithemba ukuthi ungangisiza.
Nginamasonto ambalwa ngizama ukufaka i-linux mint 16, kepha okwamanje lapho ngicishe ngiqeda ukufakwa ngithola iphutha ngenganekwane ethi into efana nokuthi "isifaki sishayisile" futhi lapho ngiqala kabusha lokhu ngisuse umgqomo ongivimbelayo kusukela ekuqaleni nge-linux noma i-win2 enginayo kolunye ukwahlukanisa.
Kungenza ngiphelelwe yithemba ngoba njalo lapho ngizama futhi kwehluleka kufanele ngifake Ubuntu 13 ukuthola i-boot yami ebili.
Ngizamile ukufaka i-mint nge-usb esebenzisa i-Yumi nokushisa i-iso ku-dvd futhi umphumela uyefana. izolo ngilande uhlelo lwe-lili creator into enjalo futhi ngalokhu ngabona ukuthi iso lonakalise amafayela. noma ngabe uyilanda kuwebhusayithi esemthethweni.
Ngiyethemba futhi ungangisiza, ngifuna ngempela ukufaka i-linux mint kwi-laptop yami ye-hp g42.
Lawa mazwana awakaDiego García, engibona engakayitholi impendulo.
Uma, njengoba usho, uwonakalisile amafayela, noma ngabe ulande iso kusuka kuwebhusayithi esemthethweni, bona ukuthi ungalithola yini kwenye ikhompyutha ukulilanda bese ulishisela kudiski. Mhlawumbe ngale ndlela uzogwema amaphutha, angenzeka lapho uqopha kukhompyutha yakho. Noma ube nomuntu omaziyo akushiyele ikhophi. Uma kuqhubeka kwenzeka kuwe, kusho ukuthi okuthile akuhambisani ne-hardware (okuxakile kancane).
Futhi manje ukuphawula okujwayelekile: Ngithola ukuthi bobabili ubuntu ne-mint banenkinga yezimvume zomsebenzisi, lapho amadrayivu "engewona awomsebenzisi" Ake ngichaze: uma ngifaka umngani we-linux mint "eduze" kwewindi le- $$$ (ukwahlukanisa C: kohlelo, ukwahlukanisa D: kwedatha), ngishiya isistimu nomsebenzisi wayo wokungena ngemvume othomathikhi onezimvume "ezijwayelekile" nomphathi (engilufake ngayo uhlelo), umngani wami akakwazi ukufinyelela ukwahlukanisa "D:" (ntfs) ngoba ucela iphasiwedi yomlawuli (engingafuni ukumnika yona ukuze angoni lutho).
Sengike ngaba khona izikhathi eziyinkulungwane futhi angiyitholi indlela yokushintsha izimvume zokwahlukanisa "D:" ukuze, njengoba ingaziphakamisi ngokuzenzakalela, okungenani ungayifaka lapho ufuna ukuyivula .
Ukube isixazululo besingagcina imibhalo yakho kumafolda akho, bengingeke ngiyithande: kusuka ewindini le- $$$ Ngifunde ukuthi imininingwane kufanele ibe kude nezinsiza.
Phambilini, umsebenzisi ngamunye wayephulwe izimvume zakhe futhi etholakala kalula. Manje kunamathuba amabili kuphela: "okujwayelekile" kanye "nomlawuli" ... Uma manje umsebenzisi ojwayelekile edinga iphasiwedi yomlawuli ... silungile!
Salvador, kufanele udale ukufinyelela okuqondile ku-D: ngaphakathi kweseshini yomlawuli bese ufaka iphasiwedi yakho. lapho unikeza izimvume zokwenza kumsebenzisi womngane wakho. Uma kungakusebenzeli
ungakha isinqamuleli kusuka ku-akhawunti yakho bese unikeza izimvume zokwenza kumsebenzisi wakho.
Yebo, kungisebenzele ngaphandle kwezinkinga kuzo zonke izinhlobo ze-Ubuntu.
Sawubona, ngisha ku-linux mint, ngisanda kuyifaka futhi lokhu okuthunyelwe kungisizile kakhulu, ngiyahlola ikhasi futhi iqiniso ukuthi ngilithande kakhulu.
Kuhle lokho! Ngiyajabula ukuthi kuyasiza.
UGaston Barriga kusho
Ngiyabonga kakhulu ngalokhu okuthunyelwe okuhle kakhulu. Ngingumfana omusha kuLinux. Ngisanda kufaka iLinux Mint 16 kulaptop yami endala yeLenovo 3000 N200 0769, konke kubonakala kuhamba kahle ngaphandle kweWiFi; Angikwazi ukwenza uxhumano olungenantambo lusebenze. Uma ngivula imenenja yomshayeli ngibona iwindi elingenalutho, ngaphandle kohlu lwabashayeli noma amadivayisi, kuphela ngomyalezo othi "abashayeli bezimpahla abasetshenziswa" Izinkinobho ze-Revert and Apply Changes azisebenzi. Ngingasisebenzisa kanjani isilawuli esingenantambo? Ngiluthokozela kakhulu noma yiluphi usizo.
Phendula uGastòn Barriga
Ngokwalokho okuchazayo, kufanele ukwenze "ngesandla" ... njengakwiWindows, noma okufanayo.
Ngalokho, kufanele ufake i-ndiswrapper bese uthola i-windows driver yekhadi.
Ukuze okungenani ube nomqondo wokuthi into imayelana nani, ngikushiyela isixhumanisi (yize esimweni sakho kungahle kwehluke):
umnikelo omuhle kakhulu kithina esiqale ukufuduka futhi sigqashula amaketanga kusuka kokungasese kuya kumahhala kungumnikelo omkhulu kakhulu
Abel lopez kusho
Ngimusha, ngafaka iLinux Mint ngaphandle kwe-inthanethi, akukho lapho ngihlala khona, yini okufanele ngiyenze manje? Ngithole indlu enobungani evumela ukuthi ngixhume, ingabe iyazibuyekeza ngokuzenzakalela noma kufanele ngiyenze ngokwami? Ngibekezelele, ngiyisidomu ... esineminyaka engama-82 ubudala ... ngifisa ukufunda.
Phendula u-Abel Lopez
Lapho ufaka amaphakheji ku-linux mint 17.1 kungitshela ukuthi ukuxhumana nezinqolobane kwehlulekile, ngingakuxazulula kanjani?
Sawubona, ngingumlandeli, futhi ngithanda ukwazi ukuthi iziphi izinhlelo ezisebenzayo ezingasekela isinamoni, oyisebenzisayo, izinto ezenzayo kanye nemininingwane ejwayelekile. Ngiyacela, kuyaphuthuma
UJaime Antonio Avila kusho
Ngimusha kuzinhlelo zokusebenza nakho konke okuphathelene ne-pc.
Intshisekelo iza ngoba ngifunda enye yale ndaba futhi nami
mendaron, bona ngeLinux Mint.
Kubukeka kukuhle impela kimi, kepha njengoba ngimusha, ngiyababuza.
I-pc yami ayiyizwa i-cd's, ngifuna ukwazi ukuthi kufanele yini ngishintshe umfundi
cd, noma uma kuyisistimu yomsindo futhi uma ngingakwazi ukuyilungisa nabashayeli.
Ngiyabonga kakhulu, kuze kube yisikhathi esizayo futhi ngiyethemba ukuthi uzongiphendula.
Phendula uJaime Antonio Avila
njenge-acer ukuze i-linux mint 17 rebeca ingahlali ingibuza okhiye
Izikhiye? Yiziphi izikhiye?
I-XMPP: ukuxhumana okuvulekile nokwenziwa emhlabeni wonke
jDirToText: Amafayela akho kuya ku-Umbhalo